उमावि डिमनमा दुई जना प्रअ : अभिभावकद्धारा प्रक्रियागत रुपमा प्रअ नियुक्ति गर्न माग
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक १६, २०७३ समय: ४:२३:४९
१६ कार्तिक, राजकुमार पासवान सप्तरी। सप्तरीको डिमन गाविस ६ स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालयमा दुई जना प्रधानाध्यपक भएपछि अभिभावकहरु सर्घषमा उत्रेका छन् । अभिभावकहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दुवै प्रअलाई हटाएर नयाँ प्रअ नियुक्तिका गर्न माग गरेका छन् ।
उमावि डिमनका प्रअ रामविलास कामती अवकाश हुने बेला निम्ति प्रअमा दुई जनालाई लेखेर दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । पूर्व प्रअ कामतीले नि.प्रअमा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक विरेन्द्र यादब र कपलेश्वर यादबलाई लेखेर दिएको छ ।
विद्यालयका अभिभावकहरुले दुई जना प्रअले विद्यालय ओझेलमा पर्ने भन्दै अहिलेका २ जना नि.प्रअलाई हटाएर प्रक्रियागत रुपमा नयाँ प्रअको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । अभिभावकहरुले १५ वर्षदेखी विद्यालयको हरहिसाब सार्वजनिक नभएकोले तत्काल लेखा परिक्षक खटाएर लेखा परिक्षण गर्नुका साथै समाजिक लेखापरिक्षण गर्न समेत माग गरेका छन् ।
दशैं अघि नै तत्कालिन जिशिअ शंकर लुईटेललाई भेटेर उनीहरुले नायाँ प्रअ नियुक्ति र विद्यालयमा पूर्व प्रअ र व्यवस्थापन समितिले गरेको अनियमिता छानविन गर्न माग पत्र बुझाएका थिए । गत भदौं १७ गते डिमनका उमाविका अभिभावक,चन्दादाता र बुद्धिजीवीहरुको एक भेला उमावि डिमन सुधारका लागि १५ सदस्य सर्घष समिति गठन गरेका छन् ।
सर्घष समितिका संयोजक जोगेन्द्र यादबले भने, “जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तत्काल निकास नदिए हामी विद्यालय ठप्प पार्छौ ।” हामीलाई अहिलेको २ जना नि.प्रअ बाहेक अर्को प्रअ प्रक्रियागत रुपमा नियुक्ति गरेर पठाउनु पर्छ । संयोजक यादबले भने “विद्यालयका पूर्व प्रअ कामती र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदिाधिकारीहरुले विद्यालय अग्रेजी र नेपाली विषयको शिक्षक अभाव रहेको त्यस विषयको शिक्षक ल्याउनुका सटा आर्थिक लाभ लिएर विज्ञान विषयको आर्थिक लाभ लिएर विज्ञान विषयको २ जना शिक्षक हुदाँ हुदैँ पुन: २ जना विज्ञान विषयकै शिक्षक ल्याएर विद्यालयको शैक्षिक अवस्था खस्काउन लागिपरेको छ । ”
तत्कालिन जिशिअ शंकर लुईटेलले प्रक्रियागत रुपमा प्रअ छनोटका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अनिवार्य चाहिने भएकोले पहिले समिति छनोट गरेर आउन सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँले भने तपाईहरु समिति गठन गर्नुस,र प्रअको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउनुस हामी तपाईहरुलाई सहयोग गर्न तयार छौं ,तर तपाईहरुले प्रक्रिया पुरा नगरि विद्यालय बन्द हडताल् गर्नुभयो भने तपाईहरुको बालबच्चाहरुलाई पढाईमा सिमस्या हुन्छ ।
विद्यालयका दुवै निप्रअलाई इनरुवा अनलाइनले गरेको कुराकानी जस्ताको त्यस्तै
निप्रअ कपिलेश्वर यादव :
जेष्ठताका आधारमा म नै यो बिधालयको निमित प्र.अ हु । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निमित्त प्रअ भनी मेरै नाममा बैंक खाता खोलिदिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नयाँ नियुक्ति बाहेक बिधालयको सबै काम कार्यावाही गर्न आदेश मलाई दिई सकेको छ । अवकाश प्राप्त गरि जानु भएको भूपू प्रअ रामबिलाश कमतीले मलाई बिधालयको काम बाहेक केही गर्न दिएको छैन । मलाई २०७३ श्रावण ३१ गते नै पूर्व प्रअ कामतीले नियुक्ति गरि सकनु भएको थियो तर बाहिरी दबावमा आई उहाँले पुन ः २०७३ भाद्र ३ गते बिरेन्द्र कुमार यादवलाई पनि नि.प्रअ नियुक्ति गर्नु भयो । आफुलाइ प्र.अ भन्दै हिड्ने बिरेन्द्र यादबको भन्दा मेरो बढी शैक्षिक योग्यता छ । विद्यार्थी ,अभिभावक र बिधालयको सबै शिक्षकहरु मलाई नै प्रअ मान्दै आइरहेका छ ।
निप्रअ बिरेन्द्र कुमार यादव :
कपिलेश्वरलाई श्रावण ३१ गते नियुक्ति दिएको तर मलाई भाद्र २ मा नियुक्ति दिएकाले कपिलेश्वरको निप्रअ पद स्वत रद्द हुनु पर्ने मेरो जिकिर छ । अहिले बिधालयको काम कार्वाही हामी दुबै नि.प्र अ. मिलेर गर्दै छौं । शिक्षक पेसामा प्रअ एड चाहिन्छ तर अर्का प्र अ. का दावेदार कपिलेश्वर सरको त्यो शैक्षिक योग्यता पुरका गरेको छेन । त्यसैले प्र अ. को हकदार म नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो दावी छ । जिशिअले बिनिलाई स्थलगत भ्रमण गर्न लगाइ निकाश निकाल्छु भनेर दशैं अगाडी नै भनेको थियो तर विभिन्न षडयन्त्र गरेर कपिलेश्वरको नाममा बैंक खाता खुलेको छ र बिनि अहिलेसम्म स्थलगत भ्रमण गर्न आएको छैन । सबै अभिभावक र बिद्यार्थीले समेत मलाइ नै प्रअ बनाउन समर्थन गरिरहेका छन । बिधालयमा बसेको शिक्षक बैठकमा बिधालयका दुई शिक्षक लक्ष्मण यादव र माधव यादवको नाममा खाता खोल्ने निर्णय भएको थियोे तर शिक्षा अधिकारीले कपिलेश्वरसंग रकमको चलखेल गरि आफ्नो नाममा खाता खोल्न लगायो ।